Xmas နဲ့ New Year မှာ အခုလို Scam ad တွေကိုသတိထားပါ | Online Service Center Myanmar -->
Online Service Center Myanmar
Xmas နဲ့ New Year မှာ အခုလို Scam ad တွေကိုသတိထားပါ
Post by: Aung Kyaw Soe
Xmas နဲ့ New Year မှာ အခုလို Scam ad တွေကို သတိထားပြီးရှောင်ရှားကြပါ။ ကိုယ်တွေကတော့ Report ad ပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီလို Scam ad တွေ တွေ့တိုင်း Report သာ လုပ်ပေးကြပါ။ Fake ad တွေပါ။
ဘယ်လို Report ad လုပ်ရမလဲ...?
1. ကြော်ငြာရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက အစက်လေး ၃ စက်ကိုနှိပ်ပါ။
2. Report ad ကိုနှိပ်ပါ။
3. Misleading or Scam ကိုရွေးပြီး Submit ကိုနှိပ်ပါ။
4. Done ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
Report ad => Misleading or Scam => Submit => Done.
အောက်ကဟာက ပထမတင်ထားတဲ့ Scam ad တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Post ပါ။ မဖတ်ရသေးသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် ထပ်ထည့်ပေးထားတာပါ။
Online ပေါ်မှာ ဈေးပေါပေါနဲ့ ပေါချောင်ကောင်းရတာပဲဆိုပြီး ဂျင်းအမိမခံကြပါနဲ့။ ဒီပစ္စည်းတွေကို ဒီလောက်ဈေးနဲ့ရတာ တန်မှတန်ပဲ၊ ခရစ္စမတ်မို့၊ နှစ်သစ်ကူးတော့မှာမို့၊ အထူး Promotion ဈေးချတာနေမှာပါလို့ လွယ်လွယ်လေးမတွေးနဲ့ သေခြာလေးစူးစမ်းကြည့်လိုက်ရင် ဂျင်းတွေဆိုတာ သိသွားလိမ့်မယ်။
အခုပြထားတာ( နောက်ထပ်လည်း ပုံစံတူတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ )တွေက ဂျင်းတွေပါ။ Facebook ရဲ့ Business Manager Tools ရဲ့ Error ကို အသုံးချပြီး sub domain တွေနဲ့ Spam လိုလုပ်ပြီး Fake data တွေနဲ့ User info တွေကို ခိုးယူစုဆောင်းဖို့ လုပ်ထားတာလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ Sponsored ဆိုပြီးပါတယ် ဂျင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော့မလုပ်နဲ့ ဂျင်းစစ်စစ်တွေချည်းပဲ။ အရာသာမြည်းချင်ရင်တော့ မြည်းကြည့်။
သူတို့တင်ထားတာတွေနဲ့ Reply comment တွေ၊ user comment တွေကို လိုက်စစ်ကြည့်ရင် Google translate ကိုသုံးပြီး ဘာသာပြန်ထားမှန်း သိသာနေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Website link တွေကိုကြည့်ရင်လည်း တခုနဲ့တခုက တူနေပြီး Sub domain လောက်ပဲကွဲသွားတာမျိုးလေးတွေပါ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
သူတို့ဖြည့်ခိုင်းတဲ့( ပေးထားတဲ့ Link တွေထဲက ) ဖောင်တွေထဲမှာ ကိုယ့် info တွေကို လျှောက်မဖြည့်ကြပါနဲ့။ ဖြည့်လိုက်မိရင် နောက်ဆက်တွဲတွေ လာနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် info တွေကိုသုံးပြီး အခြားသူတွေကိုလိမ်တာ၊ ကိုယ့် info တွေသုံးပြီး ကိုယ့်ကို ပြန်လာလိမ်တာမျိုးတွေ ခံရနိုင်ပါတယ်။
Scam sale post တွေ အများကြီးမှ အများကြီး ပွထနေပါတယ်။
Post - 1
Post - 2
Knowledge Security Sharing Technology
မှတ်ချက်(Comment)ပေးသွားလိုတာရှိပါကပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ရေးသားပေးလိုသည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်။
How to use Myanmar Unicode font for Windows10 and Mozilla Firefox
Facebook Account Help Service
ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆို မြန်မာလို Translate လုပ်ပြီးဖတ်ချင်လား? ( Video )
Advertising Browser Cyber Crime Facebook Facebook Boost Google Google Play Interview Jobs Knowledge Messenger Mobile Mozilla Firefox Myanmar Font News Security Service Sharing Technology Tutorial Unicode Video Website Youtube
Website, Security, Facebook Boost, All Online Services and Training များကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Pyay Road, Hlaing Twonship, Yangon, Myanmar.
Copyright © Online Service Center Myanmar. Design By Premium Templates|-| Online Services Center |-|Services - Facebook Boost Service |-| Inexpensive Trainings Service |-| Website Service |-| Security Service |-| All Blog Post |-| Back to ->